Sekota: Iji Eke Ọgba Iji Wepu weebụsaịtị
Nchịkọta weebụ a kọwapụtara dịka nbudata data ntanetị bụ usoro nke inweta data site na weebụ na mbupu data n'ime usoro ihe bara uru. N'ọtụtụ ọnọdụ, webmasters na-eji usoro a wepụ ọtụtụ data bara uru site na ibe weebụ, ebe a na-echekwa data weghaara na Microsoft Excel ma ọ bụ faịlụ mpaghara.
Olee otú iji wepụ weebụsaịtị na Eke Ọgba
Maka ndị na-amalite, Eke Ọgba bụ otu n'ime asụsụ mmemme ndị a na-ejikarị eme ihe nke na-emesi ike ịgụpụta koodu - ta?l? terlik sat?n al. Ugbu a, Eke Ọgba na-agba ọsọ dị ka Eke Ọgba 2 na Eke Ọgba 3. Usoro mmemme a na-emepụta njikwa nchekwa nchekwa na usoro ihe omimi. Ugbu a, asụsụ mmemme Python na-egosikwa mmepe obodo.
Gini mere Python?
Inweta data sitere na weebụsaịtị ndị siri ike na-achọ nbanye abụrụwo ihe ịma aka dị ukwuu maka ọtụtụ webmasters. N'ime nkuzi nkuzi a, ị ga - amụta esi ewepu saịtị nke chọrọ nbanye ikike iji Eke Ọgba. Nke a bụ ntụziaka nzọụkwụ nke ga-enyere gị aka mezue usoro nchịkọta nke ọma.
Nzọụkwụ 1: Ịmụta weebụsaịtị
Iji wepụ data sitere na weebụsaịtị ndị siri ike chọrọ ikike nbanye, ịkwesịrị ịhazi nkọwa achọrọ.
Iji malite, pịa aka na "Aha njirimara" ma họrọ na nhọrọ "Nlele elekere". "Aha njirimara" ga-abụ isi.
Pịa aka nri na akara ngosi "Paswọdu" ma họrọ "Ikike enyo".
Chọọnụ "authentication_token" n'okpuru isi akwụkwọ. Kwee ihe ntinye zoro ezo gị uru. Otú ọ dị, ọ dị mkpa iburu n'obi na saịtị weebụ dị iche iche na-eji akara ntinye zoro ezo dị iche iche.
Ụfọdụ weebụsaịtị na-eji ntinye nbanye dị mfe ma ndị ọzọ na-ewere ụdị mgbagwoju anya. Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na saịtị sticking na-eji usoro mgbagwoju anya, lelee akwụkwọ arịrịọ gị ma gosi akara ndị dị mkpa na igodo ndị a ga-eji abanye na ebe nrụọrụ weebụ.
Nzọụkwụ 2: Ịrụ Ọrụ Na-abanye n'Ịntanet Gị
Na nzọụkwụ a, mepụta ihe nnọchianya nke ga-enye gị ohere ịbanye na nbanye dị ka ọ bụla gị rịọrọ. Ihe nke abuo ị ga-atụle bụ wepụ "akara csrf" site na ibe weebụ gị. Ihe akara ahụ ga-enyere gị aka mgbe nbanye. N'okwu a, jiri XPath na lxml weghachite akara. Mee usoro nbanye site n'itinye arịrịọ na URL nbanye.
Nzọụkwụ 3: Data scraping
Ugbu a, i nwere ike wepu data sitere na saịtị gị. Jiri XPath chọpụta ihe ị chọrọ iche ma mepụta nsonaazụ. Iji mee ka nsonaazụ gị gosipụta, lelee koodu mmepụta nke mmepụta ụdị rịọ ọ bụla. Otú ọ dị, ikwenye na nsonaazụ ahụ anaghị agwa gị ma ọhụụ nbanye na-aga nke ọma ma na-eme ka ọ bụrụ ihe ngosi.
Maka ndị ọkachamara na-ekpochapu ọkụ, ọ dị mkpa iburu n'obi na nlọghachi azụ nke nyocha nke XPath dị iche iche. Nsonaazụ dabere na okwu XPath nke onye njedebe na-agba ọsọ. Ịmara na iji okwu XP mgbe niile na ịmepụta okwu XPath ga-enyere gị aka wepụ data site na saịtị ndị chọrọ nbanye ikike.
Site na Eke Ọgba, ịkwesighi ịchọta omenala ma ọ bụ echegbu onwe gị banyere diski ike disk. Eke Ọgba na - emepụta data sitere na saịtị di iche iche na nke di omimi nke choro nbanye ikike iji nweta ọdịnaya. Were ihe nchọgharị weebụ na ọkwa na-esote site na ịwụnye mbipute Python na kọmputa gị.